Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Crime » Rajasthan Dhaqan Xun oo Dalxiisayaasha Dambi ayuu ka dhigaa
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Crime • Wararka Dowladda • Warshadaha Warshadaha • Wararka Hindiya • News • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka
Rajasthan iyo dambiyada dalxiiska
Durba dal hodan ku ah dalxiiska, Rajasthan ee Hindiya ayaa qaaday tallaabo ballanqaadyo badan leh oo lagu hagaajinayo laguna kobcinayo waayo-aragnimada dalxiiska, labadaba socdaalka gudaha iyo dibaddaba.
Sharciyo cusub ayaa wax weyn ka tari kara dalxiisayaasha ka -caga -juglaynta iyo waaya -aragnimada xun inta ay fasaxa ku joogaan Rajasthan.
Anshax -xumada loo geysto dalxiisayaasha ayaa hadda loo arki doonaa dembi la garan karo, dambi.
Haddii uu qofku ku soo noqdo habdhaqanka noocan ah, dembiilaha ayaa markaa xabsiga la dhigi doonaa iyada oo aan suurtogal ahayn dammaanad.
Gobolka woqooyi, oo soo booqdayaal ka yimaada dalka gudihiisa iyo dibaddaba, wuxuu la yimid sharci wax weyn ka tari kara dalxiisayaasha ka -cidhiidhiga iyo waaya -aragnimada xun inta ay fasaxa ku jiraan.
Dhaqan -xumo kasta oo loo geysto dalxiisayaasha ayaa hadda loo arki doonaa dembi la garan karo, oo haddii dabeecadda noocan ah lagu soo noqnoqdo, dembiilaha ayaa xabsiga la dhigi doonaa iyada oo aan suurtogal ahayn dammaanad.
Si taas loo gaaro, wax -ka -beddel ayaa la sameeyay oo qaybta 27A ayaa lagu soo bandhigay Ganacsiga Dalxiiska Rajasthan, Xeerka Fududeynta iyo Xeerarka 2010. Tan waxaa lagu meel -mariyey cod -bixin Golaha Gobolka. Hoggaamiyeyaasha warshadaha ayaa sheegaya inay si xiiso leh u daawan doonaan sida cabbirkan looga hirgeliyo dhulka.
Qaybta 13 ee Xeerka Xeerka 2010 Xeerka wuxuu ka hadlayaa “mamnuucidda falalka iyo waxqabadyada qaarkood ee goobaha dalxiiska, aagagga, iyo meelaha loo safro,” kaas oo mamnuucaya in la jiido, la tuugsado iyo in la iibiyo maqaallo lagu iibiyo meel kasta ama meel kasta oo dalxiis ah.
In kasta oo gobolku helo dalxiisayaal badan meel fog iyo meel u dhow si ay u arkaan jiidashada dabiiciga ah iyo taallooyinka badan ee dabiiciga ah, haddana waxaa jira cabashooyin badan oo kuwa wax iibiya iyo kuwa wax iibiya ay khiyaameeyaan, taasoo ka tagaysa aragti iyo waayo -aragnimo liidata. Gaar ahaan, waxaa soo kordhay dhacdooyinka dambiyada dumarka taas oo keenta in dalxiisayaasha ajnabiga ah ay fasax u qaataan meelo kale.
Rajasthan wuxuu hormuud u ahaa dalxiiska oo leh dhaqammo hodan ah oo soojiidasho leh iyo sidoo kale fanka iyo farshaxanka. Sanadihii ugu dambeeyay, si kastaba ha ahaatee, gobolada sida Madhya Pradesh, Kerala, iyo Goa waxay la yimaadeen fikrado cusub oo hal abuur leh qorshaynaysa inay soo jiidato dalxiisayaasha.
Qalcadaha iyo daaraha waaweyn ee dawladnimada leh oo leh hantiyo dhaxal ah sidoo kale, ma laha wax la mid ah, laakiin taasi macno malahan haddii gobolku sidoo kale helay magac xun maxaa yeelay qaar ka mid ah idaha madow ayaa sumcadda dawladnimada wax u dhimaya.
Illaa iyo hadda cabbirka cusub ee lagu xakameynayo dhaqan -xumada ayaan weli la arkin.